‘क्वारेन्टाइन हाउगुजी हैन, आफू सुरक्षित बन्ने घर हो’- फिचर - कान्तिपुर समाचार
‘क्वारेन्टाइन हाउगुजी हैन, आफू सुरक्षित बन्ने घर हो’
भारतबाट फर्किएकाको क्वारेन्टाइन अनुभव
चैत्र २२, २०७६ पर्वत पोर्तेल
बाहुनडाँगी, झापा — झापा मेचीनगर–४ बाहुनडाँगीका यामबहादुर विष्ट पछिल्लो पटक दुई महिना अघि मात्रै दक्षिण भारतको केरला पुगेका थिए । त्यहाँको एक होटलमा कार्यरत उनी ६ महिना, वर्ष दिनमा आउजाउ गरिरहन्थे । तर, यसपटक उनी समय अगावै फर्किनु पर्यो ।
‘कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि केरलाका होटलहरु धमाधम बन्द भए ’, विष्टले सुनाए, ‘ मैले पनि घर फर्किने निर्णय लिएँ ।’ उनका होटल साहुले त त्यतै बस्न सुझाएका थिए । तर, उनी मानेनन् । अन्ततः केरलामै कार्यरत छिमेकी बिक्रम बुढाथोकी, सतीस दर्जी, सचिन थापा र निरथ रायको साथ लागेर यिनी फर्किए । ‘साहुले तलब पनि दिएको थिएन’, उनले भने, ‘ पकेट खर्च मात्रै बोकेर हिडियो ।’
चैत ९ यिनीहरु फर्किए । फर्किएकै दिन मेचीनगर नगरपालिकाको पहलमा स्थानीय सरस्वती माविको क्वारेन्टाइनमा यिनीहरुलाई राखियो । क्वारेन्टाइनमा १४ दिन बिताएर शनिवार पाँचै जना घर फर्किए । ‘१४ दिनपछि घर फर्किन पाउँदा औंधी खुसी लागेको छ’, दर्जीले भने । क्वारेन्टाइनमा रहुन्जेल खान, बस्न र स्वास्थोपचारको प्रबन्ध वडा कार्यालयले मिलाएको थियो ।
उनका अनुसार त्यहाँ खाने र बस्ने व्यवस्था राम्रो थियो । बेला बेला स्वास्थ्यकर्मीहरु स्वास्थ्य जाँचका लागि आउँथे । क्वारेन्टाइनमा इन्टरनेटको समेत प्रबन्ध थियो । जसका कारण दिन काट्न सहज भएको थियो । ‘इन्टरनेट नभएको भए चै हामीलाई गाह्रै हुन्थ्यो होला’, दर्जीले भने, ‘इन्टरनेटले दिनहरु सहज वनाइदियो । ’
क्वारेन्टाइनमा रहदा खाने, वस्ने र सुत्ने वाहेक काममै थिएन । खाना खाएपछि फेसबुकको भित्तामा उनी औला चलाउन थालिहाल्थे । ‘१४ दिनको बसाईमा इन्टरनेट यति चलाइएछ कि अब हेर्न बाँकी केही छैन होला जस्तो लागेको छ’, सचिन थापा मुस्कुराउदै भने, ‘अब निक्कै दिनलाई पुग्ने गरी चलाइसकिएको छ ।’
विक्रम वुढाथोकीले आफ्नो सुरक्षाका लागि पनि अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्न भारत र विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई आग्रह गरे । ‘धेरैले क्वारेन्टाइनलाई हाउगुजी ठानेको देखियो’, उनले भने, ‘तर, क्वारेन्टाइन हाउगुजी हैन, आफू सुरक्षित बन्ने घर पो हो त ।’
शनिबार घर पठाउनु अघि चिकित्सक टोलीले अन्तिम पटक यिनीहरुको स्वास्थ्य जाँच गरेको वडाध्यक्ष नवीन बरालले बताए । उनका अनुसार पाँचै जना कोरोना संक्रमणवाट मुक्त छन् । उनले भने,‘उनीहरु ढुक्क भएर घर फर्किएका छन् । उनीहरु ढुक्क हुनु भनेको परिवार ढुक्क हुनु हो ।’
प्रकाशित : चैत्र २२, २०७६ १९:५८
के आफ्नो नायकत्व देखाउन अधिकार र कर्तव्यक्षेत्रबाहिर जान कुनै अधिकृतलाई छुट छ ? हिरोइजम् देखाउने र प्रचारप्रसार गर्ने तर कर्तव्यपथमा चुक्ने प्रवृत्तिलाई प्रहरी नेतृत्व र गृह प्रशासनको नेतृत्वले समयमै नियन्त्रण गरोस् ।
चैत्र २२, २०७६ उत्तमकुमार कार्की
विश्व अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीको चपेटामा छ । ३ महिनादेखि चीनको वुहानबाट सुरु भएको महामारी आजसम्म विश्वका २०४ मुलुकमा फैलिसकेको छ । जुनबेला चीनको बुहान सहरमात्र कोरोना विरुद्धको लडाइँमा एक्लो लडिरहेको थियो त्यसबेलासम्म विश्‍व तमासे बनिरहेको थियो । आज यसले सबैलाई गाँजेपछि सबैको चेत खुलेको छ ।
नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन र विश्वव्यापीकरण महामारीको यस लडाइँमा होमिन पुगेको छ । जुन समय नेपालले लकडाउनको घोषणा गरको थियो, त्यस समयसम्म विश्वभर लगभग २ लाख यस महामारीको चपेटामा परेका थिए भने मृतकको संख्या १३ हजार हाराहारीमा थियो ।
भाग्यवश नेपालमा त्यस बेलासम्म शून्य संक्रमण थियो । नेपालमा भएको लकडाउनको ११ दिनमा संक्रमितको संख्या ९ पुगिसकेको छ भने भाग्यवश यस महामारीको कारणबाट कसैले मृत्युवरण गर्नु परेको छैन ।
यही अवधिमा विश्वको तथ्यांक हेर्दा ११ दिनअघि अर्थात् २०७६ चैत १० गते २ लाख हाराहारीमा रहेको संक्रमण बढेर २१ गतेसम्म आइपुग्दा १० लाख नाघेको छ भने १३ हजार हाराहारीमा रहेको मृतकको संख्या बढेर ६० हजार नाघेको छ । झन् कहालीलाग्दो स्थिति त के छ भने विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्तराज्य अमेरिकामै संक्रमितको संख्या सबैभन्दा बढी २ लाख नाघेको छ ।
यस आपात्कालीन घडीमा राज्यका सबै अंगलगायत सम्पूर्ण नागरिक एकजुट हुनुको विकल्प छैन र लागिपरेकै पनि छन् । नेपालमा सरकारी अंगहरुमध्ये ठूलो नेटवर्क भई समाजमा सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा अग्रणी स्थानमा रहेको नेपाल प्रहरीको भूमिका पनि अहम् रहन्छ नै ।
यस पंक्तिकारले आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण ३० वर्ष प्रहरी सेवामै व्यतित गर्दाको अनुभव तथा विद्यमान अवस्थामा आफूले महसुस गरेका विषयहरुलाई समेटेर यो आलेख सुझावको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु ।
यद्यपि, नेपाल प्रहरीमा सेवारत साथीहरू सक्षम, दक्ष र जानीफकार हुनुहुन्छ, तसर्थ यस पंक्तिलाई सुझाव नभएर पुनर्स्मरणको रुपमा लिन सक्नु हुनेछ ।
यस किसिमको महामारीमा नेपाल प्रहरीको सदाझैं नियमित कार्यको साथै मुख्यतया तीनवटा कर्तव्य (भूमिका) हुन्छन्ः
क) महामारीको विषयमा भएका सरकारी नीति, नियम र आदेशहरुको आफ्नो विषय र कार्यक्षेत्रभित्र रहेर कार्यान्वयन । महामारीको विषयमा क्रियाशील रहेका कानूनहरुको कार्यान्वयनसागै महामारी फैलन नदिन सरकारी तबरबाट जारी भएका नीति र आदेशहरुको तदारुकतासाथ कार्यान्वयन गर्ने तर यसोगर्दा आफ्नो कार्यक्षेत्र, अधिकार र प्रचलित नियमको त्यत्तिकै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यहाँ प्रचलनमा के छ भने जुन काम तोकिएका अन्य सरकारी निकायले सम्पादन गर्दैनन्, त्यी सबै कार्य नेपाल प्रहरीले गरिदेओस् भन्ने मनसाय सरकार र समाजले पनि लिएको हुन्छ । नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले पनि यदाकदा त्यसरी कार्यक्षेत्र, अधिकार र क्षमता बाहिरको काम जिम्मा लिई गर्ने गरिन्छ जुन स्वाभाविक रुपले सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन गाह्रो साँगुरो नै हुन्छ ।
अन्ततोगत्वा नेपाल प्रहरीले नाहकमा प्रतिष्ठा गुमाउनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ नीति, नियम र आदेशको पालना तदारूकताको साथै सतर्कतापूर्वक गर्नु पर्छ । यसो गर्दा मानवीय संवेदनाका कुरामा पनि त्यत्तिकै ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ ।
केही उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहान्छु:
उदाहरण १ः केही दिन पहिले दार्चुलाको सिमापारीबाट कुनै नेपाली नागरिक वैध बाटोबाट नेपाल आउन नपाएपछि आफ्नो जीउज्यानको जोखिम मोलेर महाकाली नदी पौडी खेलेर पार गरी नेपाल प्रवेश गर्छन् । नेपाल प्रहरीले निजलाई पक्राउ गरी नांगेझार पारेर बजार घुमाइन्छ । यस प्रकरणमा पक्राउ गर्ने विषयसम्म त सरकारी आदेशको पालना होला, तर के एक नेपाली नागरिक (जो अपराधी होइनन्) ले आफ्नो मुलुक फर्कन पाउने संवैधानिक हक प्रयोग गर्न खोज्दा अपराधीले भन्दा बढी अपमानित हुनुपर्ने अवस्था ठीक हो त ? यहाँ प्रहरीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने पहिलो कुरो त पक्राउ हैन, सामाजिक दूरी कायम राख्ने र यसको लागि विदेशबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरा हो ।
के कुनै व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, नराख्ने र त्यसको व्यवस्था गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हो ? नेपाल प्रहरीले जिम्मेवारी वहन नगरोस् भनेर कदापि भन्न खोजिएको हैन, खाली के भने यस विषयमा सम्बन्धित निकायलाई सघाउने सम्मको जिम्मेवारी मात्र नेपाल प्रहरीको हो भन्ने यस पंक्तिकारलाई लागेको छ ।
दोस्रो, नांगै शहरमा घुमाउने कुरो । यो त समाज र सरकारले समेत पचाउन सक्ने कुरै
उदाहरण २: त्यस्तै अर्को यस अवधिमा दैनिकरुपमा सुनिने लकडाउन उल्लंघन गर्ने व्यक्तिउपर गरिने भाटे कारवाहीको । यो पंक्ति टाइप गर्दैगर्दा मोरङको पथरीमा लकडाउन उल्लंघनकर्तालाई निर्घात कुटपिट गरी अस्पताल भर्ना गरिएको समाचार सुनियो । यो भाटे कारवाही कुन कानूनमा के अपराध गरेवापतको सजाया हो ? मलाई थाहा छ, नेपाल प्रहरीले आफ्नो जिउज्यानको पर्वाह नगरी देशवासीको सेवामा जुटिरहेको छ । राज्यका अन्य अंगहरुभन्दा कम स्रोतसाधन र सुविधामा कुनै गुनासोबिना यस किसिमको संकटकालमा सबैभन्दा अग्रणी स्थानमा रही काम गरी आर्जन गरेको नेपाल प्रहरीको अतुलनीय योगदान र साख यस्तै किसिमका घटनाहरुबाट नधमिलियोस्, यसतर्फ सबै तह र तप्काका प्रहरी कर्मचारीहरु सजग र सचेत हुनुपर्छ ।
ख)कालाबजारी विरुद्ध अनुगमन र कानूनी कारवाही । समाज संकटको घडीमा रहेका बखत केही आपराधिक तत्वहरू मौकाको फाइदा लुट्न लागिपरेकै हुन्छन् । यो मौकामा समाजमा कृत्रिम अभाव श्रृजना गरी कालोबजारी गर्ने, तस्करी गर्ने तथा मिसावट गर्ने लगायतका मुनाफाखोरहरु सक्रिय हुने गर्छन् । यी कार्य विशुद्ध आपराधिक कार्य हुन् र यस्ता गतिविधि विरुद्ध लड्नु नेपाल प्रहरीको अहम् कर्तव्य हो । हो, नेपाल प्रहरीले यस्ता अपराध विरुद्ध लड्न सरोकारवाला अन्य निकायहरुको पनि साथ र सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । यसको लागि दैनिक उपभोग्यवस्तुहरुको भण्डारण कहाां, कति, कस्तो अवस्था र कसको नियन्त्रणमा छ, बिक्री बितरण के कसरी भईराखेको छ, सूचना संकलन गर्ने र सरोकारवालाहरुसाग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ग)सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रबाट उपलब्ध गराइने सेवा र आपूर्ति व्यवस्थामा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट सहजीकरण गर्ने । एकातिर यस्तो अवस्थामा केही हदसम्म अभाव त हुन्छ नै भने धेरै हदसम्म भण्डारमा रहेका दैनिक ऊपभोग्यवस्तुहरु बजारसम्म वा उपभोक्ताको घरदैलोसम्म पुग्न पाएको हुादैन । दैनिक मिहिनेत, मजदुरीको आधारमा जीविकोपार्जन गर्नेहरुको अवस्था नाजुक हुन्छ । सरकारको कर्तव्य हुन्छ— व्यापारी वा सरकारी भण्डारमा रहेका दैनिक उपभोग्यवस्तु बजारमा वा आवश्यकतानुसार उपभोगकर्ताको घरदैलोमा पुर्‍याइदिनु र दैनिकी चलाउन कमजोर अवस्थामा रहेका नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनु ।
यस्तो अवस्थामा आपूर्ति कार्यमा सुरक्षा दिने र संकटकालमा ढुवानी समेतको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यसको लागि सरकारसाग छुट्टै साधनस्रोतको माग राख्न हिच्किचाउनु हुादैन किनभने प्रहरीले प्रदान गर्ने नियमित सेवाको लागि उपलब्ध साधनस्रोत अन्तै मोडिदिादा प्रहरीको आधारभूत सेवामा नै नकारात्मक असर पर्ने हुन्छ । त्यस्तै आपूर्तिकर्ता र भण्डारण व्यवस्थामा पनि सुरक्षा चासो र चिन्ता त्यत्तिकै रहनुपर्छ ।
त्यस्तै सेवा पुर्‍याउने निकाय र व्यक्तिहरु यस्तो अवस्थामा सुरक्षा संकटमा रहेका हुन्छन् । खासगरी स्वास्थ्यकर्मीहरु, अस्पतालहरू र औषधी उत्पादक र बितरकहरुको समेत सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिनु र उपलब्ध गराउनु प्रहरीकै चिन्ता र चासोको विषय हो ।
यस बिचमा केही गलत उदाहरणहरू पनि देखिएका छन् । प्रहरी नेतृत्व र गृह प्रशासन नेतृत्वले समयमै सुधार गर्ने, गराउने विश्वाससाथ शब्द चित्र राख्दैछु ।
उदाहरण ३: केही दिन पहिले कुनै प्रहरी अधिकारीले आफ्नो भौगोलिक कार्यक्षेत्र भित्रका जनताले खान पाइएन, उपचार पाइएन भने उहााहरुलाई घरघरमा खाना र स्वास्थ्यसेवा पुर्‍याउाछु भन्नु भयो । मलाई लाग्यो नेपाल सरकारले उहाालाई विश्वास गरेर सबै साधनस्रोत र अधिकारले सम्पन्न बनाएछ कि क्या हो ?
के नेपाल प्रहरीले यत्रो विधि जिम्मेवारी पाएकै हो ? के यो समेतको जिम्मेवारी वहन गर्न नेपाल प्रहरी सक्षम छ ? यी जिज्ञासासहित सम्बन्धित निकायमा अनौपचारिक तवरले बुझ्दा त्यस्तो केही नभएको पाइयो । मैले खण्ड ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ मा उल्लेखित जिम्मेवारी नै नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारी हो भन्ने मनशायको जवाफ पाइयो ।
के आफ्नो नायकत्व देखाउन अधिकार र कर्तव्यक्षेत्रबाहिर जान कुनै अधिकृतलाई छुट छ ? छैन भने यस किसिमका हिरोइजम् देखाउने र प्रचारप्रसार गर्ने तर कर्तव्यपथमा चुक्ने प्रवृत्तिलाई प्रहरी नेतृत्व र गृह प्रशासनको नेतृत्वले समयमै नियन्त्रण गरोस् । व्यक्तिगत हिरोइजम् देखाइ संगठनको साख गिराउने खेल नदोहोरियोस्, समयमै सचेत होऔं ।
मैले समाचार च्यानलहरुमा देख्ने गरेको छु—सुरक्षामा खटिने प्रहरी कर्मचारीहरुले थर्मल गनको प्रयोगबाट स्क्रिनिङ गरिरहेका छन् जुन काम स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य प्राविधिकको हो । ती प्रहरी स्वास्थ्यकर्मी नै हुन् भने ठिकै छ, अन्यथा सुरक्षामा खटिने प्रहरीलाई थर्मल गन स्क्रिनिङको कार्य गर्नु, गराउनु व्यावसायिक हो जस्तो लाग्दैन, यसमा मैले खासै व्याख्या गर्नु छैन ।
अन्तिममा यस संकटको घडीमा नेपाल प्रहरीलगायत सरकारका सबै निकाय सचेत हुनुपर्ने विषय हो– संकट पछिको संकट अर्थात् लकडाउन पछिको अवस्था । यस लकडाउन अवधिमा सबै नागरिकले आआˆनो ज्यानको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै केही समयसम्म अभावलाई झेलेर पनि बस्न सक्छ ।
तर लकडाउनको अवधि लम्बिन गई लामो समयपश्चात् संकट समाधान भएपछि अर्को संकट उत्पन्न हुनसक्छ, त्यो हो चरम अभाव । यस चरम अभावबाट उत्पन्न हुनसक्ने यावत् विकृति, विसंगति र छरपष्ट अपराधलाई रोक्न पनि यही युद्धको बिचमै तयारी गर्नुपर्ने पनि आजको आवश्यकता हो (इटालीको अहिलेको अवस्थाः लुटपाटबाट हामीले समय नघर्किंदै सिक्नु पर्छ) ।
यस संकटको घडीमा महायुद्ध लड्न कठिन छ, तर हाम्रो एकताले यसलाई परास्त गर्ने अवश्यम्भावी छ ।
लेखक पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हुन् ।
प्रकाशित : चैत्र २२, २०७६ १९:४९